Tattoo-ka Pentagram, muusikada maqaarkaaga | Tattoo
Tattoo-ka Pentagram, muusikada maqaarkaaga
ka xaraashka ulaha waxay leeyihiin luuqadda muusikada oo ah naqshaddooda ugu weyn, taasi waa, maahan oo keliya shanta xariiq ee ay ka kooban yihiin shaqaaluhu, laakiin sidoo kale dhammaan qoraalada hees ka kooban.
Iyagu waa hab ku habboon oo lagu muujiyo jacaylkaaga muusikada iyo, marka lagu daro, inaad qaaddo heesaha aad ugu jeceshahay maqaarkaaga. Hoos waxaan ku aragnaa qaabkan muusikada oo faahfaahsan!
1 Waa maxay pagram?
2 Qaar ka mid ah fikradaha tattoo
Waa maxay pagram?
Shaqaaluhu waa qaab muusiko ah (taasi waa, qaab loo qoro muusikada oo, haddii aad taqaanid luqadda, ku barto sida loo ciyaaro) oo ka kooban shan sadar iyo afar boos oo siman iyo isku mid ahaanshaha meesha lagu qoro dhammaan qoraalada iyo astaamaha muusigga ee lagama maarmaanka u ah in lagu ciyaaro hees.
Waxay ka bilaabantay qarniyadii dhexe, mahadsanid heesaha Gregorian, shaqaaluhuna waa wax caadi ah in laga helo astaamo ay ka mid yihiin qoraalada, inta soo hartay (taas oo calaamadeysa marka aan loo baahnayn in la ciyaaro), clef (kuwa ugu caansan waa G iyo F), cabirka iyo isbadalada ( taas oo muujinaysa xawaaraha ay tahay in qaybta la taabto).
Qaar ka mid ah fikradaha tattoo
Tattoo-yada Pentagram, markaa, sidoo kale waxay yeelan doonaan walxahan. Noocyada ugu caansan ee loo yaqaan 'tattoos', waxaan ka helnaa qoryo ay weheliyaan xoqitaan ama qoraallo qaarkood, madow iyo caddaan ama taabasho midab leh (qaabka biyo-biyoodka ayaa si gaar ah u shaqeeya). Tattoo-yadaani waa naqshado fudud oo sida caadiga ah lagu qaado meelo yaryar ama cidhiidhi ah oo jidhka ah.
Ikhtiyaar kale oo aad u qabow ayaa ah in la doorto si loo helo hees dhan oo la sawiray. Dhadhankaaga shakhsi ahaaneed ama waxa hees kuu gudbineyso ama ku xasuusineyso ayaa door muhiim ah ku leh halkan. Waad raadin kartaa dhibcaha ama la xiriir kartaa muusikiiste dhaqameed si uu kuu caawiyo. Waxay kuxirantahay gabalka, waxay yeelan doontaa waxyaabo badan ama ka yar (laga bilaabo fudeydka gabal caan ah ilaa kakanaanta opera aria, taas oo xitaa leh dhibco kaladuwan oo kuxiran aaladda), oo waliba la ciyaari doonta meesha uu tattoo ku noqo mid ka fiican.
Tattoo-ka Pentagram runtii waa qabow, sax? Noo sheeg, ma leedahay tattoos noocaas ah? Noo sheeg waxaad rabto faallooyinka!
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos leh qaabab » Tattoo-ka Pentagram, muusikada maqaarkaaga
Tattoos jirka oo dhan, su'aalaha iyo jawaabaha qaybahaas ballaaran!
Tattoo qoob ka ciyaarka, marka qoob-ka-ciyaarku yahay dareenkaaga